Scorecoin စျေး - အွန်လိုင်း SCORE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Scorecoin (SCORE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Scorecoin (SCORE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Scorecoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
SCORE – Scorecoin
Market ကဦးထုပ်: $106 974.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Scorecoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Scorecoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ScorecoinSCORE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0188ScorecoinSCORE သို့ ယူရိုEUR€0.0159ScorecoinSCORE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0143ScorecoinSCORE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0171ScorecoinSCORE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.169ScorecoinSCORE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.118ScorecoinSCORE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.418ScorecoinSCORE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0701ScorecoinSCORE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0251ScorecoinSCORE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0261ScorecoinSCORE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.422ScorecoinSCORE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.146ScorecoinSCORE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.1ScorecoinSCORE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.41ScorecoinSCORE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.3.18ScorecoinSCORE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0258ScorecoinSCORE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0282ScorecoinSCORE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.586ScorecoinSCORE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.131ScorecoinSCORE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.99ScorecoinSCORE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩22.31ScorecoinSCORE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦7.14ScorecoinSCORE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.38ScorecoinSCORE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.522
ScorecoinSCORE သို့ BitcoinBTC0.000002 ScorecoinSCORE သို့ EthereumETH0.00005 ScorecoinSCORE သို့ LitecoinLTC0.000319 ScorecoinSCORE သို့ DigitalCashDASH0.000188 ScorecoinSCORE သို့ MoneroXMR0.000198 ScorecoinSCORE သို့ NxtNXT1.34 ScorecoinSCORE သို့ Ethereum ClassicETC0.00266 ScorecoinSCORE သို့ DogecoinDOGE5.31 ScorecoinSCORE သို့ ZCashZEC0.000197 ScorecoinSCORE သို့ BitsharesBTS0.727 ScorecoinSCORE သို့ DigiByteDGB0.686 ScorecoinSCORE သို့ RippleXRP0.0622 ScorecoinSCORE သို့ BitcoinDarkBTCD0.000637 ScorecoinSCORE သို့ PeerCoinPPC0.0667 ScorecoinSCORE သို့ CraigsCoinCRAIG8.42 ScorecoinSCORE သို့ BitstakeXBS0.788 ScorecoinSCORE သို့ PayCoinXPY0.323 ScorecoinSCORE သို့ ProsperCoinPRC2.32 ScorecoinSCORE သို့ YbCoinYBC0.00001 ScorecoinSCORE သို့ DarkKushDANK5.93 ScorecoinSCORE သို့ GiveCoinGIVE40 ScorecoinSCORE သို့ KoboCoinKOBO4.14 ScorecoinSCORE သို့ DarkTokenDT0.0174 ScorecoinSCORE သို့ CETUS CoinCETI53.33
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 00:10:02 +0000.